Liva Andriamanantena · Jolay 2020 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Jolay, 2020
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Jolay, 2020
Azia Atsinanana 22 Jolay 2020
Efa-taona no lasa, mbola tsy raharahian'ny governemanta ny fitakiana amin'ny fananganana ny voamiera mahaleotena hanao fanadihadiana ny famonoana.
Mediam-bahoaka 19 Jolay 2020
Filazana ny andiany voalohany amin'ny fifanakalozan-kevitra an-tserasera momba ny fikatrohana ny fiteny nomerika izay atao ny Alakamisy 16 Jolay 2020.
Ireo pejy fitantarana manokana
Ato anatin'ireto pejy ireto no hamintinanay ny fitantarana ankapobeny ataon'ny Global Voices momba ireo vaovao lehibe amin'ny alàlan'ny bilaogy sy ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra manerantany. Mandefasa mailaka aty aminay raha manana soso-kevitra ho an'ireo pejy fitantarana vaovao manokana ianao.
Jona volan'ny fireharehana 2020: Manome voninahitra ny fifaharana sy ny faharetana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+ manerantany
Mediam-bahoaka 15 Jolay 2020
Ho an'ny firenena maro manerantany, ny volana Jona no ankalazana ny Volan'ny Fireharehana ho fotoana hanomezam-boninahitra ny zo sy ny fahatsiarovana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+. Misy dikany manokana ny volana noho ny rotaka tany Stonewall tamin'ny Jona 1969 tany New York izay nanombohan'ny hetsika ho fanafahana LGBTQI+ tany Etazonia. Nambaran'ny ny...
Mediam-bahoaka 13 Jolay 2020
Fanehoan-kevitra maromaro avy amin'izao tontolo izao tamin'ny fihetsiketsehana vokatry ny famonoan'ny mpitandro ny filaminana fotsy hoditra ilay Amerikana mainty hoditra George Floyd tany Etazonia ny 25 May.
Mediam-bahoaka 05 Jolay 2020
Nogadraina ny vahoaka Tiorkika an-tapitrisa mahery sy ny vondrona Miozolomana Han, santionany amin'ny fahoriana fotsiny anefa izany.
Azia Atsinanana 04 Jolay 2020